ဒီ က ဗျာအ လွ တ် ကျ က်
စိတ်အလိုမို့ အရိပ်ခိုလို့ စောင့်သတဲ့
ဗုံလုံအမြီးဖက်လိုက်ဖို့ ဟန်ရေးတပြင်ပြင် ...
ရင်ဘတ်ချိတ်ပြီး လက်မတထောင်ထောင် ...
တယောက်က ဓားတလက်နဲ့ အားတက်မာန်စွာ
နတ်နေကိုင်းပါမချန် ရှင်းမယ့်တကဲကဲ ..
မြေနိမ့်ကိုမှန်းဆဆ ငူတူတူ ....
ခွင့်ခါစောင်းမြောင်း အလစ်ချောင်းနေ ....
အားအားရှိတိုင်း အရောင်ပြောင်းလို့မပြီးနိုင် ..
မျက်ကလဲဆံပျာ ဟိုကြည့်သည်ယောင် ..
အသင့်အနေအထားနဲ့ ချောင်းလို့မြောင်းလို့ ..
အရိပ်နေ အခက်ချိုးမယ့်ဟန်တကဲကဲ ....
ကဲ .. ဗမာလိုပြောမယ်
မင်းတို့ပါရင် မရောက်နိုင် ..။ ။
28 . 8 . 18
- Poem Maung Maw Kun